‘भद्रगोल’ लाई लाइकभन्दा डिस्लाइक धेरै, ‘सक्किगोनी’ लाई दर्शकको साथ ? | Nepalisongskhabar.com
‘भद्रगोल’ लाई लाइकभन्दा डिस्लाइक धेरै, ‘सक्किगोनी’ लाई दर्शकको साथ ?
काठमाडौं – आन्तरिक लफडाका कारण भद्रगोलको टीम टुक्रियो । नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने ‘भद्रगोल’ बाट छुट्टिएका कलाकारको समूहले नयाँ टेलिश्रृङ्खला ल्याएको छ । कुमार कट्टेल र अर्जुन घिमिरेले निर्देशन गरेको नयाँ श्रङ्खलाको पहिलो भागलाई दर्शकले रुचाएका छन् ।
‘सक्किगोनी’ को पहिलो भागमा उनै पात्र र चरित्रलाई देखाइएको छ तर स्थान भने फरक छ । अहिले यो टिमले छायांकनका लागि काभ्रेको पाँचखाल रोजेको छ । नयाँ परिवेशमा छायांकन गरिएको यो शृङ्खलालाई दर्शकले झनै रुचाएका छन् । दीपक आचार्यले सिरिजको निर्देशन गरिरहेका छन् ।
यो समाचार तयार पार्दासम्म पहिलो एपिसोडलाई युट्युबमा मात्र २० लाखभन्दा बढीले हेरिसकेका छन् । यस्तै शृङ्खला मन पराएको भन्दै दर्शकले प्रतिक्रिया पनि छोडेका छन् । कतिले भने यो शृङ्खलालाई ‘भद्रगोल’ सँग तुलना गरेका छन् ।
रोजी राई नामक प्रयोगकर्ताले लेखेकी छिन्, ‘उत्कृष्ट कमेडी, यस्तै गर्दै गर्नु साथी हो, अर्को एपिसोडको प्रतीक्षामा ।’
कतिले धतुरे र पाँडेको र्‍याप ब्याटललाई खुबै रुचिका साथ लिएका छन् । थापा खेमबहादुरले कमेन्ट गरेका छन्, ‘यो सक्किगोनी सिरियलको नाम भद्रगोल र भद्रगोलको नाम सक्किगोनी राख्नुपर्‍यो ।’
यता मिडिया हबको प्रस्तुति रहेको ‘भद्रगोल’ लाई भने दर्शकले गाली गरेका छन् । ‘भद्रगोल’ को नयाँ भागलाई ज्योति काफ्ले र अशोक धितालले निर्देशन गरिरहेका छन् । यसका पछिल्ला भागमा लाइकभन्दा बढी डिसलाइक आउन थालेको छ । भद्रगोलका पुराना टिमले छोडेपछि यो सिरिजले मन नजितेको धेरै दर्शकले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘जसले जे भनोस्, भद्रगोल टिम आफ्नो हिम्मत नहारी अगाडि बढोस्, शुभकामना,’ एक प्रयोगकर्ताले शुभकामना दिँदै लेखेका छन् । अर्का एक प्रयोगकर्ताले भने निराश हुँदै लेखेका छन्, ‘भद्रगोल नाम फेर्नुपर्‍यो, नामअनुसार काम भएन, भदगोल नाम सुन्दा पहिलेकै याद आउँछ, हेर्दा अहिले दिक्क लाग्छ ।’
Published date : 2019-10-17
स्वीमिङको समयमा पूरै घर खाली गर्छिन् नीता अम्बानी !
म संसारकै सबैभन्दा ‘लक्की’ अभिनेत्री : केकी अधिकारी
कृष्ण ओलीको बास्तविक जिवन भोगाईमा आधारित गीत ”कृष्णको राधा ” हेर्नुहोस भिडियो सहित
राम्जी खाण, करिश्मा ढकाल, सरिश्मा मगर र रितु तामाङको अभिनयमा बत्ति बल्यो (भिडियो सहित)
चर्चित मोडल करिष्माले गायक रामजी खाँडलाई “घरवार बनाई देउ” भन्दै हिडेपछी मच्चियो तहल्का ( भिडियो सहित )